Ekpere nye Saint Alejo. ? Ịchụpụ mmadụ, ndị hụrụ ya n'anya na ndị iro ya
Ekpere San Alejo A na-eme ya mgbe ọ dị anyị mkpa itinyetụ n'etiti anyị na onye ọzọ n'ihi na mgbe ọ dịịrị ya ime mkpebi ịpụ, ọ mere n'echeghị azụ.
Ekpere nke mejuputara anyi n'ike, nyekwa anyi ezi uche nke ndi n’adighi eme anyi nma ma obu ndi n’enwe ike.
N'otu ụzọ ahụ a ga - eme ekpere iji wepu ezigbo ọbụbụenyi na ezigbo onye ikwu gị.
Ọ bụ ngwa ọrụ na-enyere anyị aka ime ka udo dị n'ụlọ na okwukwe anyị na-abawanye kwa ụbọchị
1 Ọnye na-bụ San Alejo?
1.1 Ekpere Holy Alexius iji chupu mmadu
1.2 Ekpere nke San Alejo ka ekewa ndi mmadu na ndi huru ha n’anya
1.3 Ime ka ndi iro ghara ikwuputa
1.4 Maka ihunanya
Ọnye na-bụ San Alejo?
San Alejo, onye na ndu bu onye agbachitere Onye Christian okwukwe. O nwere nchegbu banyere ịkụziri ndị ọzọ ụkpụrụ nke okwukwe. Ahụhụ ma ụfọdụ jụrụ, mana nnukwu onye nkuzi nke ndị ọzọ.
Onweghi aha amamịghe a mụrụ ya ma taa mara na ọ bụ otu Ndị nsọ na-enyere anyị aka idozi ọnọdụ ndị siri ike.
Otu nwoke nke nwere ike ịhapụ akụ na ezi na ụlọ n’ihi Kraịst, okwukwe ya a na-enweghị ike ịkwagide ya ka ọ na-aga n’okporo ụzọ n’enweghị ụlọ ma ọ bụ ihe eji enyere ha aka mana o nwere ebum n’obi pụtara ụwa nke ịgbasa alaeze Chineke site n’ikwusara mmadụ niile okwu ya. ụwa.
Ọ raara onwe ya nye ọ kachasị ụmụaka, iji kụziere ha okwu Chineke n’ọnọdụ nri. Otu ihe atụ iji soro n’ịhụnanya na nraranye nye okwukwe.
Ekpere Holy Alexius iji chupu mmadu
Oh mma Saint Alexius
Ezigbo ihe atụ nke ịhụnanya
Na i jeere onye obula i nwere ike n’emeghi ihe o bula
Anyị bịara ịgọzi gị
Gosi gozie nzobe anyi
Nihi na site na obi umeala gi, na aka uku gi, i ritere ihunanya Chineke
Taa ka m biara ịrịọ gị amara
Na ị napụ m ihe na-adịghị mma, nke na-ewetara m ọtụtụ ihe mgbu
Dịka i si n’ebe ndị mụrụ gị nọ pụọ
Inwe ike ito eto n’ime mmụọ
Pupu na ndu m (aha onye), ka inwere ike ibi n’udo
Kụziere m ntakịrị ịhụnanya ị nyere onye agbata obi gị
Iji mụta ịnagide ihe
Maka ndị na-adịghị mma, ma anyị enweghị ike ikewapụ
Gi onye nọ n’aka nri Chineke
A na m arịọ gị arịrịọ maka gị n’anya
Ka ịchọta ihu ọma m
Ime ka m bụrụ ezigbo mmadụ
Ma ya mere enwere m ike ịgọzi ndụ m
Meekwa m obere obi ụtọ
N'ihi na isoro onye a bie ezigbo ndu
Ana m ekele gị San Alejo gọziri agọzi
Maka ige ekpere m
Nyekwa m nkwado na-enweghị usoro ..
San nwere mmasị n’ekpere San Alejo iji chụpụ mmadụ?
Awayhapụ mmadụ, nwere ike ịbụ, n'ọnọdụ ụfọdụ, ihe gbagwojuru anya iji mezuo enwerekwa ọnọdụ ndị na-eduga anyị ka anyị na ndị ahụ anyị achọghị.
Ọ bụ ya mere ekpere a siri dị ike n'ihi na ọ na-enyere anyị aka ịbụ onye ahụ hapụrụ anyị n'afọ ofufo.
Ọ na - arụ ọrụ ma ọ bụrụ na anyị na - eme ya iji baara anyị uru dị ka ọ dị na nke ezinụlọ, dị ka nwatakịrị, bụ onye na --emekarị ndị enyi na - adịghị mma, tupu mbibi ahụ enweghị mgbagha, ọ kachasị mma ịrịọ San Alejo ka ọ debe nke ahụ. mmadu
Ekpere nke San Alejo ka ekewa ndi mmadu na ndi huru ha n’anya
San Alejo, gi onye nwere ikike igbochi ihe ojo niile gbara ndi ahonruru nke Chineke aririo, a na m ario gi ka i wepu ila… (Kpoo aha onye ibe gi)
Site na… (Kpọrọ aha onye ọ hụrụ n'anya) A na m akpọ gị, a na m akpọku gị ka ị kpọrọ gị pụọ, gaa ention (Kwuo aha onye hụrụ ya n'anya) Kpọrọ ya (ma ọ bụ) gaa mpaghara nchefu, Ka ọ ghara ịgabiga ọzọ ụzọ… (Kwuo aha onye gị na ya bi).
Ka iyi mmiri na-asọ, yabụ gbara gaa ... (Kọọ aha ibe gị) Si ... (Kwu aha onye hụrụ gị n'anya) Ruo Mgbe Ebighị Ebi.
Dịka ọ bịara ... (Kwuo aha onye hụrụ ya n'anya) Na ndụ nke ... (Kwuo aha ibe gị) Nke ọ napụrụ ozugbo na ndụ ya.
Na ha enweghị ike ịnọkọ ma ọ bụ n'ime ụlọ ebe a na-eri nri, ma ọ bụ n'ime ụlọ iri nri, ma ọ bụ na tebụl iri nri, na ha enweghị ike ịnwe nzuzo na-enweghị ịkpọasị na ịkpọasị ibe ha.
A na m ajụ gị San Alejo, ọ bụrụ na ha achọpụta na ha ahụghị onwe ha, ma ọ bụrụ na ha na-ekwu okwu ... (Kwuo aha ibe gị) Na ... (Kwuo aha onye hụrụ gị n'anya) ka ha ghara ịghọta ibe ha ọzọ na na nkewa ahụ bụ nke ikpeazụ na ruo mgbe ebighị ebi. A na m ario mmụọ nke okporo ụzọ ka-ebelata ụzọ niile….
Daalụ San Alejo maka ịga iwu m.
A na m arịọ gị ka ịlaghachi onye mụ na ya so echegharị, m na-ekwe nkwa ịgbasa ekpere a ma na-ekele gị maka onyinye enyere gị!
Kpee ekpere nke St. Alejo iji kewaa mmadu abuo nwere okwukwe di uku.
Na mmekọrịta nke di na nwunye, ndị ọzọ na-ahapụkarị ihe ndị ọzọ. San Alejo na-enyere anyi aka idozi nkwekorita nke di na nwunye n’enweghi nke ato.
Ọ maara uru ezi ezinụlọ bara, ọ bụkwa ya mere o ji enyere anyị aka iwepụ ndị ahụ chọrọ iyi ụlọ anyị egwu.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ọ bụ ọbụbụenyi dị mfe ma ọ bụ emeburu mmekọrịta nke ndị hụrụ n'anya, ekpere a siri ike ma dikwa oke nma.
Ime ka ndi iro ghara ikwuputa
Saint Alejo dị ebube, eze mbụ nke Aleksandria, ahapụla m n’abalị ma ọ bụ n’abalị, m na-arịọkwa gị ka ị na-elekọta m ma na-agbakụta m pụọ n’aka ndị iro na-abịa n'okwukwe ọjọọ megide m.
Naputam ma gbochie m n'ike nke ekwensu, ndi ojoo, umu anu ojoo na nke ndị amoosu na ịgba afa. San Alejo, San Alejo, San Alejo, ugboro atọ m ga-akpọ gị.
Oge nile ka enyerem aka, ka I wepuga m n'ihe ọjọ ojo nile.
Uzo obea ato ka m n’enye gi, nke bu ihe ngosi nke ezi onye Kristi, ime ka onye omekome taa ya ntaramahuhu, ka onye n’obodo choro ime m ihe ojoo.
Nke a ga-emebi asụsụ ndị chọrọ ikwu gbasara m.
Ana m arịọ San Alejo dị ike gị, ka ịghara ahapụ ihe gbara m gburugburu nke ụlọ m na ihe niile dị n'ụkwụ m bụ ọrụ m. Amen. Jizọs
San Alejo de León, ọ bụrụ na mmadụ ọ bụla chọrọ ịrara m nye, ka Chineke hapụ nku ya gbadaa na obi m wee wedata m ala, dịka Jizọs bịara n'ụkwụ obe.
Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ iwepụ ndị iro, nke a bụ ekpere dị mma nye Saint Alexius.
Enwere ndị chere na ndị iro ga-anọ nso na-ele ha, mana enwere ndị iro na ọ ka mma ịhapụ ha, na nke a bụrụ iro ga-eduzi.
Mana enwere ikpe dị njọ karịa ndị mmadụ mere gagharịa n'etiti ndị enyi mana n'ezie ha bụ ndị iro.
N’ụdị ndị a, ikpe ekpere San Alejo na-enyere anyị aka chụpụ ha n'ebe anyị nọ ndammana na enweghị nsogbu.
Ọ maara ihe ọ bụ inwe ndị iro m kacha nso ma ọ bụ ya mere ọ ghọrọ Saint, maka inyere ndị mmadụ aka inwe udo n'agbanyeghị ọnọdụ dị iche iche siri ike anyị na-ekpughere. Awayhapụ ndị ezinụlọ na ndị enyi adịghị mfe, mana ọ na-adịkarị mkpa.
Saint Alexius, gi onye mezuru ihe niile, gi onye jisiri ike ihu ihe niile, O doro gi anya nke oma Ka inwee ike ime mmụọ m ma mata na odidi m enweghi ihunanya, nke di nso, nyem aka ihunanya. maka onye ozo / ma obu dochie m, Mee kemist n’etiti ha, me ka ha guzo iche.
San Alejo, mee ka ihu-n'anya gi di iche iche, si n’ebe o / wepu ya laghachigha, laghachikwutem, Ka ị ghara inweta n’enweghi m ma obu nrọ, Na akuku gi abughi onye obi uto, na obu Mu na odi ndu gi. agaba, na nro n’echiche gi.
Lovehụnanya ahụ nke m nwere, na ọ ka bụ, Na onye bịara abịa wepụrụ ndụ ya, Onye ahụ nke guzoro n'etiti mụ / ya, Mee ka uche ya wezuga ya, San Alejo, lovehụnanya ahụ metụtara m.
A na m arịọ ka ọ ghara inwe ike ịnọnyere ya / ya, Na ndụ ya abụghị ihe ọ bụla karịa nke m, yabụ m laghachitere, na ịhụnanya m bịara, San Alejo, Achọrọ m ya, ọ dị mma, ọ / ya kacha mkpa.
Ausculta n’ekperem na arịrịọ m, ma na etinye m onu.
Ekpere a kpere Saint Alexander maka ịhụnanya siri ezigbo ike!
Ọ dị mkpa ka e nwee ịhụnanya na ịhụ ndị mmadụ n'anya kemgbe ekpere. N'inwe ike ịhụ n'anya ma nwee ụlọ, ezinụlọ jikọtara ọnụ na ịhụ ụmụaka na-etolite bụ ahụmịhe ndụ mara oke mma nke mmadụ niile kwesiri ịdị ndụ.
Agbanyeghị, ọ na-agwa ụfọdụ karịa karịa ndị ọzọ na nke a bụ n'ihi ebumnuche ọjọọ nke ugbu a jupụtara na obi.
San Alejo, mgbe ọ nọ n’ụwa ọ nwere ike ibi ụdị ụdị ịhụnanya a ebe ọ nwere ezinaụlọ tupu ya enyefee onwe ya kpam kpam maka ihe nke Chineke.
Mana ihụnanya ahụ erughi ebe ahụ mana o toro ma gbanye ya n'ike nke rue taa na-arụ ọrụ ebube dị ịtụnanya.
Rịọ ya ka ọ rụọ ọrụ ebube ịchọta ezi ịhụnanya bụ ọrụ nke okwukwe ga na-anabata ọsịsọ ọsọ ọsọ n'ihi na ihe niile anyị na-arịọ nna n'aha Jizọs, nna ga-enye anyị.
Jiri ohere ike nke ekpere niile nke San Alejo!